खोकनावासी र प्रहरीबीच झडप, ४ प्रहरी घाइते- समाचार - कान्तिपुर समाचार
असार २०, २०७७ तस्बिर : बिजु महर्जन
काठमाडौँ — खोकनावासी र प्रहरीबीच शनिबार दिउँसो झडप भएको छ । खुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीयलाई प्रहरीले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको हो । झडपमा परी ४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ७ राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ ।
झडपपछि अहिले खुडोल फाँटमा स्थानीयले पुनः धान रोपेका छन् भने त्यस क्षेत्रमा प्रहरीको बाक्‍लो उपस्थिति छ । यो फाँट काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ‘जिरो किलोमिटर’हो । सो क्षेत्रको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । तर, स्थानीयले भने मुआब्जा लिइसकेका छैनन् ।
प्रकाशित : असार २०, २०७७ १३:५९
यस परिस्थितिमा हाम्रो यो सपना कसरी साकार पार्ने होला १ कोही छ ? गुहार ! गुहार !!
प्रकाशित : असार २०, २०७७ १३:४३